Esikhathini sethu, kuyimfashini ukuba ibe nempilo, futhi umuntu olandela impilo ngezinye izikhathi uhlanza umzimba we-toxin kanye ne-toxin. Nsuku zonke umzimba kufanele ubhekane nemiphumela emibi yemvelo, ngakho-ke kulula ukukwenza uma ungenayo i-toxins. Phela, imithi ayisebenzi kahle emzimbeni ohlatshiwe. Futhi awukwazi ukwenza ngaphandle kokuhlanza umzimba. Isimbangela sezifo eziningi, umphumela wokuthi umzimba womuntu ugcwele imikhiqizo yokubola, izinto zangaphandle, ama-slags, ama-poisons. Imiphumela yokugqoka i-polyps emathunjini, amatshe ezinso. Ukudla okuhlanza umzimba wezinyosi, sifunda kule ncwadi.
Ukuhlanza umzimba wezinyosi
Indlela yokuqala. Ukumnika umfutho we-tea kuyindlela engcono kakhulu yokuhlanza umzimba we-toxin. Umphumela wokuhlanza ungafinyelelwa ngokudliwa nsuku zonke 2 noma 3 izibuko zokufakelwa. Ungenza ukuhlanza ngokuphelele. Uma usebenzisa njalo ukumnika kwamakhowe, pheqa zonke izinsuku ezimbili, lapho kuzohlanzwa kahle. Ukubambisana ngamanzi amaminerali, kungcono ukuthi kungabi non-carbonated, izithelo nemifino, okusanhlamvu okucebile fiber, amakhambi okwephuza itiye. Kungakapheli izinsuku ezimbili, uphuze ingilazi eyodwa ye-kibbut ngehora ngaphambi kokudla, kathathu ngosuku.
Ukudla kwasekuseni: i- porridge emasimini angenayo (ibhakede, i-millet, ilayisi), ngaphandle kokushukela, ngaphandle kosawoti nasemanzini.
Usuku lokudla: isaladi yemifino yenkathi ngaphandle kwamazambane. Kungaba yimifino enjengokuthi: isaladi eluhlaza, isithombo, iklabishi. Futhi i-beet, izaqathe, utamatisi, ukhukhamba.
Isidlo: noma yisiphi isithelo (orange, banana, pear, apula).
Ngaphandle kokukhipha amakhowe wetiye, ungaphuza ama-herbal teas namanzi amaminerali. Ngobusuku ngaphambi kokulala udinge ukuphuza ingilazi yetiye ye-herbal, esiza ukuhlanza amathumbu, ngokusho kwesinye sezinto zokupheka:
1. Sihlanganisa izingxenye eziyi-1 zezimbali ezimbi, izingxenye ezingu-5 zotshani lwe-camomile, izingxenye ezintathu ze-hay sheet, ingxenye eyodwa yezimbali ze-lavender, izingxenye ezingu-3 zamagatsha ezinambuzane. Thatha isipuni esingu-1 seqoqo bese uthela ingilazi yamanzi abilayo, sifaka kwi-thermos amahora amabili noma amathathu.
2. Sihlanganisa izingxenye ezimbili zegxolo le-buckthorn, ingxenye engu-1 yezithelo ze-coriander, ingxenye engu-1. I isipuni seqoqo sizogcwala ingilazi yamanzi abilayo, sifaka amahora angu-1 noma amabili.
Ngemuva kokuhlanzwa kwezinsuku ezimbili kwezinsuku ezimbalwa, zibeke umthamo wokudla, ungafaki ngokushesha isisu sakho. Futhi uhambe kusuka izitsha zemifino kuze kube izitsha zobisi, khona-ke ukudoba izitsha, futhi kuphela lapho kunamanani amancane ekudleni izitsha.
Uma ukuhlanzwa kwenziwa ngenyanga, isimo sezempilo siphuthuma ngokushesha, ukujabula nokukhanya emzimbeni wonke kubonakala, ukuzivikela komzimba kuqiniswa, ukukhathala kunciphile.
Indlela yesibili. Thatha isipuni esingu-1 sikasawoti kanye ne-1 isipuni soju, u-soluble ku-1.5 amalitha amanzi ashisayo abilisiwe. Masiphuze amaminithi angu-30 ngaphambi kokudla kwasekuseni. Inqubo yenziwa izikhathi ezimbili ngenyanga.
Indlela yesithathu. Izipuni eziyi-5 eziqoshiwe ze-pine izinaliti, i-spruce noma i-pine, uthele uhhafu wamitha wamanzi abilayo bese upheka imizuzu engu-10. Sizokwazi ukumelana namahora angu-12 ekushiseni, ukucindezela futhi uthele ngaphakathi kwe-thermos. Ithatha decoction esikhundleni samanzi phakathi nosuku. Nsuku zonke silungisa i-decoction enjalo. Phuza kuze kuvele umchamo.
Indlela yesine. Izithelo zokudla ziyokhipha isimiso sokugaya nokuhlanza amathumbu. Kodwa okokuqala udinga ukulungiselela ukudla. Ngezinsuku ezimbalwa, udinga ukuphuza izibuko ezingu-8 zamanzi a-distilled ngosuku, kuzosusa ubuthi emzimbeni nasebusweni.
Emva kokudinga ukudla kwezithelo: Ngesikhathi sezinsuku ezintathu zokuqala, sebenzisa amajusi wezithelo noma izithelo eziluhlaza, ama-distilled amanzi. Uma ukuhlanza okunjalo kuqhutshwa njalo, kuzokwenza ngcono isimo sakho sempilo nokwenza ube mncane. Ukuze uthole ama-plums okudla kahle, amaphisileji, amapheya, ama-apula, ama-grapefruits, ama-orang. Ngosuku lwesine, engeza imifino eluhlaza, bese ukhetha okusanhlamvu, futhi ezinsukwini ezimbalwa ungadla inyama enamafutha aphansi. Ukugcina kufanelekile, udinga ukuchitha "izinsuku zokuhlanza" njalo ezinyangeni ezintathu. Ebusuku udinga ukudla ama-apula angu-1 noma amabili, kanye nengilazi yobisi oluboshiwe noma ingilazi ye-kefir, ezosheshisa inqubo yokuhlanza umzimba.
Indlela yesihlanu. Ngaphambi kokulala ukuphuza izipuni ezimbili zamafutha we-sunflower, ungasebenzisa amafutha omnqumo, i-linseed noma i-pumpkin nge-½ ijusi lemonti, nasezinsukwini ezimbili zokupuniza zamafutha we-sunflower kanye namapuni amabili we-vodka. In the brew brew futhi uphuze itiye nezitshalo ezilandelayo zokwelapha - chicory, inja rose, chamomile, mnti. Isikhathi sokwelashwa amaviki amane.
Ngosuku esiphuza ngayo izinkomishi ezi-3 noma ezine zokumnika okuvela ku-calendula, i-chamomile, i-nettle - eyodwa yamakhemikhali wamanzi abilayo kufanele sithathwe, sigcizelela imizuzu engu-20 noma engu-30 futhi siphuze no 1 litre of kefir. Ukwengeza, yenza ukuhlanzwa ngamafutha e-sunflower (bheka indlela 5).
Minus 5 kilograms izinsuku ezingu-10
Ukudla kuqukethe ama-5 carbohydrate nezinsuku ezingu-5 zeprotheni, okudinga ukushintshwa, amaprotheni ngosuku, usuku lwesibini lwe-carbohydrate, amaprotheni ngosuku lwesithathu njalo njalo.
Usuku lweprotheyini: ekuseni ekuseni ngesisu esingenalutho udinga ukuphuza 1 indebe yamanzi abilisiwe.
Ukudla kwasekuseni: ikhukhamba entsha noma imifino, iqanda elibilisiwe eli-1. Bilisa inkukhu ngaphandle kasawoti, uzothola amagremu angu-700 noma angu-800 yenkukhu, kumele idliwe emini. Ngosuku lokuphuza 2 amalitha amanzi.
Usuku lwama-carbohydrate: ulungise isaladi ye-½ kilogram yezinqathe, ½ kilogram yezinyosi eziluhlaza, ½ kilogram iklabishi. Ingredients grate, engeza isipuni 1 sejusi kalamula bese uqubuka yonke isaladi ukuze ijusi ivele, uhlanganise kahle. Njalo ihora udinga ukudla ingilazi yalesi isaladi. Emini, uphuze amalitha amabili amanzi.
Inikeza ukuncipha kwafika ku-1500 kcal, ngokunciphisa amafutha nama-carbohydrate, kodwa ngaphandle kokunciphisa inani lamaprotheni adingekayo. Ekudleni kuvunyelwe ukudla izithelo nemifino, ngaphandle kwamazambane, ngobuningi bokuthi ikhalori yabo ayiqedi 1250 kcal. Udinga izikhathi ezingu-6 ngosuku kanye nezinxenye ezincane. Inkambo yokudla iwu-2 noma amaviki amathathu, hhayi ngaphezu kwenyanga.
Iresiphi ye-Tibet yokuvumelana
Ukuze ulahlekelwe isisindo, udinga ukuphuza ingilazi ngosuku ngosuku lwe-mushroom lobisi lwe-Tibet, imizuzu engama-30 ngemuva kokudla futhi 1 noma 2 izikhathi ngesonto ukuhlela ukulayisha izinsuku ezinamapheya, ama-apula, ama-mushroom kefir.
Imenyu yosuku lokuzila ukudla
Ukudla kwasekuseni: ingilazi yama-mushroom ukumnika ngaphandle koju noshukela, i-apula.
Isidlo sasekuseni sesibili: ingilazi yama-mushroom kefir, i-apula, ipheya.
Usuku lokudla: ucezu lwesinkwa esimnyama nesilazi se-mushroom kefir.
Dinner: i- apple-pear isaladi, ethulwe nge-mushroom kefir.
Ngaphambi kokulala, udinga ukuphuza i-mushroom kefir nge isipuni soju.
Ukulahlekelwa isisindo kuzozinza, ungalahlekelwa yi-3 kuya ku-4 kilograms ngenyanga. I-flora yamathumbu ijwayelekile, futhi imetabolism, imvelaphi ye-hormonal ibuyela emuva evamile, ama-cholesterol plaques asusiwe.
Uma udla njalo amaviki amabili noma amathathu "isaladi elihle" khona-ke lokhu kuzokwenza ngcono kakhulu isimo sezipikili, izinwele, isikhumba, futhi kuyothinta impilo yakho.
Thatha ama-oats angu-5 noma ayisithupha etafuleni ama-flakes ama-6 noma 8 wezipuni zamanzi abandayo abilisiwe. Engeza i-spoonful of honey kanye namantongomane angama-7 noma ayi-10 aqoshiwe. Shiya imizuzu engu-30, kodwa kungcono ebusuku ukuba udle esiswini esingenalutho ekuseni. Ngaphambi kokudla, engeza amajikijolo omuncu noma izithelo, ilamula le-½ lejisi, ama-5 noma 6 wezipuni zobisi, i-apple elalibiwe emafutheni. Ake siwaphuze isaladi ngoju noma ama-raspberries amasha, ama-strawberries. Ngezinye izikhathi sinezela omisiwe, esikhundleni sobisi, i-curd, umlimi oqoshiwe oqoshiwe, ama-apricot omisiwe.
Uma ufuna ukuba omncane udinga ukudla izitsha ezingu-4 ngosuku ukuze amandla abo amanani ayi-calories angu-400.
Imenyu yesampula ne-calorie ecacisiwe okuqukethwe
Raspberry muesli - 409 kcal
Hlanganisa i-cup cup ye-½ ne-1 cup raspberries kanye ne-chocolate chips
Okukhethwa kukho - ama-pancake anezinyosi - 425 kcal
Isidlo nesidlo sakusihlwa
Risotto nemifino - 384 kcal
Fry anyanisi oqoshiwe kuze kube yilapho kutholakala isipuni se-bhotela nesilinganiso esifanayo somnqumo. Engeza izinkomishi eziyi-1.5 ze-inkukhu umhluzi kanye no-1.5 izinkomishi zelayisi, usawoti omncane futhi upheke emlilweni omncane, ugxume njalo. Siphalaza 1 inkomishi yomhluzi, faka amagremu angama-300 ama-peas aluhlaza okweluhlaza bese uletha ngamathumba. Imizuzu emibili ngaphambi kokususwa, siyidla isitsha nge-grates ka-Parmesan egayiwe ngezinongo kanye nejusi lemon.
Ungadla ushokolethi kanye ne-pizza, nabanye, kodwa ngaphakathi kwekharoriki ethile.
Izinketho zemenyu yokudla
4 izilinganiso zemifino ngosuku. Izinkomishi ezimbili zezaladi yemifino, ukukhonza okulingana nendebe yamanzi.
3 izithelo izithelo ngosuku.
1 ukukhonza okusanhlamvu ngosuku.
Ukuthengiswa kwemikhiqizo yobisi e-3 ngosuku.
1 ukukhonza inyama ngosuku. Izinhlobonhlobo: amagremu angu-15 amantongomane, 1 inkomishi yamabhontshisi, amaqanda amabili.
Amathiphu kulabo abafuna ukunciphisa umzimba:
1. Ungadli ukudla esiswini esingenalutho.
2. Thatha isanqante noma i-apple yomsebenzi, futhi uma ufuna okuthile ukuhlafuna, kuzofika ngendlela efanele.
3. Ukunciphisa ukufisa ukudla nokuphefumula kuzosiza amagatsha amathathu noma amane e-parsley entsha.
Kunconywa ngesikhathi sokulala futhi nganoma isiphi isikhathi ukusebenzisa i-muesli:
Ku-flakes oatmeal sizofaka izithelo zomvini ngaphandle kwembewu, i-banana, umlimi omuncu, ukusika ama-apricot omisiwe, ngeke sigcwalise ubisi oluvuthiwe noma ubisi oluvuthiwe. Yidla 1 ukukhonza.
Wonke umuntu uyazi ukuthi amavithamini emzimbeni awunqwabelani, kodwa kufanele eze nokudla. Kodwa ukuze ungathinteki impilo yakho ngokukhathazeka okungadingekile, abantu bathengisa amavithamini amakhemikhali ekhemisi. Kodwa kukhona abantu abanesifo sofuba emavithamini. Kulesi simo, indlela eyodwa yokuphuma, udinga ukusizakala ukuthi iyiphi imvelo engasinika yona.
Iresiphi: Thatha ingxenye eyodwa yamajikijolo e-hawthorn, izingxenye ezimbili zezintambo ze-rose, 1 ingxenye yamaqabunga ashisayo. Siyifaka bese sithatha isipuni esingu-1 somxube bese siwugcwalisa ngo-300 ml wamanzi abilayo, siyifaka, siyifake ihora eli-1. Ukucindezeleka. Sithatha isigamu indebe kathathu ngosuku. Inkambo yokwelapha inyanga eyodwa. Kunesidingo sokuhlanza umzimba ngaphakathi.
Leli qoqo lihlanza igazi lamafutha amaningi ngokweqile, ngakho-ke ku-cholesterol eyingozi. Ngaphezu kwalokho, uma uthatha lokhu kuphuza, ungasiza inhliziyo nesibindi kungcono ukubhekana nokudla okunzima - amazambane othosiwe, imayonnaise, i-pasta nenyama, futhi kungcono ukusebenza isibindi nenhliziyo.
200 amagremu of ilayisi ugobe bese ubilise ngaphandle kosawoti. Yidla ngesikhathi sosuku. Lokhu kudla kuqukethe amandla amancane. Ilayisi kahle isusa amakhemikhali nama-slags emzimbeni, kodwa, njengezo zonke izidlo zokuvimbela, akufanele zisetshenziswe isikhathi eside.
Utamatisi waziwa njengomkhiqizo wokudla. Iqukethe i-fiber, i-amino acid, amaprotheni, ama-acids aphilayo, inqwaba yensimbi, amavithamini PP, K, B1, B2, B6, C, nezinye izinto eziningi eziwusizo.
Utamatisi asetshenziselwa ukondla kwezokwelapha, njengomthombo owengeziwe wokubuyiswa kabusha komzimba ngamanoni amaminerali namavithamini. Futhi inqwaba yamavithamini ehlangene ne-pectin izinto kanye ne-fiber yenza utamatisi kubalulekile ekudlaleni kwabantu abanesisindo somzimba ngokweqile futhi abanezinkinga ezihlukahlukene zesimetabolism sosawoti. Utamatisi ovuthiwe kufanele udliwe ngezindlela ezahlukahlukene ze-anemia, njengoba aqukethe i-folic acid ne-digestible yensimbi yensimbi.
Njengoba ziqukethe isamba esikhulu sama-organic acid, utamatisi unganqanda ukusebenza kwe-pathogenic microflora yamathumbu, kusebenze izinqubo zokugaya futhi zikwazi ukuvusa ukudla. Kunezinhlanzi ezimbalwa phakathi kwazo, lokhu kwenza kube umkhiqizo wokudla ekuvimbeleni ukuqina kwesifo somzimba.
Ngenxa ye-carotene ne-vitamin C, utamatisi kubhekwa njengenhlangano ye-antiscorbtic. Ukuze uhlangabezane nezidingo zansuku zonke zomuntu kulezi zakhi, udinga ukudla amagremu angu-200 yalezi zitshalo nsuku zonke efomu elisha.
Ama-salts, aqukethe utamatisi, ajwayelekile ukulinganisela komzimba we-acid-base futhi ngenxa yalokho ukunciphisa umfutho wegazi. Uma udla utamatisi, lokhu kuzoshukumisa isibindi, okudingekile ku-cirrhosis nokuvuvukala. Kubalulekile ukwazi ukuthi inqwaba yama-acids ephilayo angabangela ukugxila kwemisipha ye-gallbladder, okuphikisanayo ne-cholelithiasis.
Utamatisi asetshenziswa ekwelapheni amanxeba ahlanzekile. Utamatisi ovuthiwe wawunomhlabathi futhi usetshenziselwa izindawo zesikhumba esivuthayo. Ezithombeni, umphumela we utamatisi wawulingana ne izaqathe kanye nekhukhamba. Yenza isikhumba sibe nomthunzi omnyama, sishintsha imibimbi. Nsuku zonke udinga ukwenza imaski imizuzu engu-10 noma engu-15 kusukela kumathpathi wezotamatisi.
Ngokwalezi zokupheka, ungakwazi ukuhlanza umzimba we-toxin kanye ne-toxin, futhi ukudla kuzonciphisa isisindo, kwenze inani elincane libe ngcono futhi uthuthukise impilo yakho.
Ukuzivocavoca ngesisu esiswini
Inkimbinkimbi yezemidlalo ekhaya kwabesifazane
Uhlelo lokunciphisa nokumisa
Umqeqeshi echibini: kungani edingeka futhi angafundisani?
Indlela yokulahlekelwa isisindo kalula naphakade
Ungashukumisela kanjani ukudlala imidlalo ngenkathi ulahlekelwa isisindo?
Ukudla nge-acidity eyengeziwe yesisu
Ushizi - luwusizo futhi lugcwele amavithamini
Amakhambi asetshenziselwa ukuncelisa
Isaladi ngesithombo kanye ne-kiwi
Yeka ukuthi ungalahlekelwa kanjani umsebenzi wakho?
Ama-gymnastics aseFrance ebusweni
Imfashini ye-fashionable ehlobo ka-2015: i-makeup ye-topical ebhishi
Indlela yokusekela ingane ngemuva kokuhlukana komzali
Izifo ezifihlekile zomlomo womlomo
Umlando womagazini "Burda"
Ubuhlobo phakathi komfana nentombazane: ubulili